अनलाइनमा नेपाली टिभी च्यानलहरु हेर्नको लागि भनेर दर्जनौँ मोबाइल एप अनि सयौँको सङ्ख्यामा वेबसाइटहरु छन्। तर आफूले हेर्न खोजेको बेला अधिकांशले काम गर्दैनन् । अर्को कुरा इन्टरनेट 'स्पिड' का कारण, नेपालमा इन्टरनेटमा टिभी हेर्न सजिलो पनि छैन ।
गत हप्ता नेपाल र केन्याविच किर्तिपुरमा भएको क्रिकेट म्याच 'एन टिभी प्लस' (नेपाल टेलिभिजन) ले प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको थियो । नेपाल टेलिभिजनकै साइटमा उक्त खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्ने व्यवस्था थियो । केही मिनेट ढिलो गरि आइरहेको प्रशारण, त्यसमाथि राम्रो भनिएको इन्टरनेटमा पनि भिडियो अड्किरहने समस्या भयो । यसै त कमशल गुणस्तरको भिडियो, त्यसमाथि अनेक समस्या, जति नै प्रयास गरेपनि एनटिभीकै साइटमा उक्त प्रशारण हेर्न सकिएन । त्यसपछि विकल्पको रुपमा युट्युब च्यानलहरु चहारियो, करिब दर्जन जति युट्युब च्यानलहरुमा उक्त खेलको प्रत्यक्ष प्रशारण आइरहेको थियो, जुन एनटिभीको साइटमा भएको भन्दा राम्रो त थियो, तर आफूले खोजेजस्तो भेटिएन । अफिसमा कर्मठ दाइले सुझाउनु भयो, नेट टिभीको एप्‌मा राम्रो आइरहेको छ, लौ यसैलाई टिभी स्क्रिनमा हेर्ने व्यवस्था मिलाउँ । अन्तिम विकल्पको रुपमा नेट टिभीको एन्ड्रोइड एपमा टिभी चलाइयो, अनि क्रोमकास्ट मार्फत टिभी स्क्रिनमा प्रोजेक्ट गरेर उक्त खेल हेरियो ।
नेट टिभी एप धेरैको लागि नौलो नहुनसक्छ । १ लाख भन्दा धेरै पटक डाउनलोड भइसकेको नेट टिभी एप्, सन् २०१५ को अन्त्यतिर सार्वजनिक गरिएको हो । पहिले चलाइएका टिभी हेर्ने एप्‌हरुले दिएको दुखका कारण, यो पनि उस्तै नै त हो भनेर चलाएको थिइन । गतवर्ष उनीहरुले वल्डलिंक तथा भायानेट मार्फत आइपी टिभी सुरु गरेपछि भने, नेट टिभीका बारेमा चासो बढेको थियो ।
नेट टिभीमा कसरी टिभी हेर्ने?
नेट टिभीमा टिभी हेर्ने दुईवटा विकल्प छन् । पहिलो फ्रि च्यानलहरु; यस अन्तर्गत सम्पूर्ण नेपाली टिभी च्यानलहरु तथा केही विदेशी च्यानलहरु निशुल्क हेर्न सकिन्छ । दोस्रो - श:शुल्क च्यानल; यस अन्तर्गत नेट टिभीमा उपलब्ध सय भन्दा धेरै च्यानलहरु पैसा तिरेर हेर्न सकिन्छ ।
नेट टिभी हेर्नको लागि, मोबाइलमा एप डाउनलोड गरिसकेपछि एप्‌मा खाता खोल्नुपर्छ (साइन अप)। साइन अप गरेपछि नेपाली तथा विदेशी टिभी च्यानलहरु हेर्न सकिन्छ । नि:शुल्क भनिएका च्यानलहरु त प्रयोगकर्ताले नि:शुल्क नै हेर्न पाइहाल्छन् । श:शुल्क हेर्नुपर्ने च्यानलहरु भने प्रयोगकर्ताले प्रति च्यानल, प्रति महिना १० रुपैँया तिर्नुपर्छ (एकमुष्ट प्याकेजमा शुल्क फरक पनि हुनसक्छ) । आफूलाई हेर्न मनलागेको श:शुल्क च्यानलहरुका लागि, टिभी च्यानल छानेर आइपे, ईसेवा लगायतबाट सजिलै पैसा तिर्न सकिन्छ ।
एप्‌मा लाइभ टेलिभिजनका अतिरिक्त, समाचार, देशी-विदेशी चलचित्रहरु, तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरु हेर्न पाइन्छ । स्थानिय स्तर (नेपालमै) होस्ट गरिएका कारण एप्‌मा सम्पूर्ण टिभीहरु, सरर चल्छन् । केही चलचित्र तथा टेलिभिजन कार्यक्रमहरु भने युट्युबमा राखिएकाछन् ।
भविष्यमा के हुन सक्ला?
संसारभरि नै 'अन-डिमान्ड भिडियो सर्भिस'को प्रयोग बढिरहेको छ । नेटफ्लिक्स, एचबिओ नाउँ, हुलु, अमेजन भिडियो सर्भिस आदि अहिलेका चर्चित भिडियो अन डिमान्ड सर्भिसहरु हुन् । नेटफ्लिक्स, हुलु आदिकै लागि भनेर दर्जनौँ कार्यक्रमहरु निर्माण तथा प्रशारण हुँदै आएकाछन् ।
नेट टिभीले साँच्चै नै अन-डिमान्ड अनलाइन कन्टेन्टमा हात हाल्ने हो भने, अहिलेलाई आफ्नै कार्यक्रम निर्माण नगरेपनि नेटफ्लिक्स जस्ता कम्पनीसँग सहकार्य गर्नसक्छ । नेटफ्लिक्स नेपालमा उपलब्ध भएपनि, पैसो तिर्ने बाटो नभएका कारण प्रयोगकर्ताले हेर्न पाएका छैनन्, यसको विकल्पको रुपमा अहिले 'टोरेन्ट'बाट डाउनलोड गरेर कार्यक्रमहरु हेरिन्छ । तर नेटटिभीमा नेटफ्लिक्सका भिडियोहरु आउने हो भने, इन्टरनेट टिभीका लागि तम्तयार जमातले पक्कै पनि आफूलाई मन परेका कार्यक्रमहरु पैसो तिरेर, स्थानिय स्तर मै हेर्नेछन् । अर्को कुरा, सिमित आइएसपीमा उपलब्ध नेटटिभी भविष्यमा अरु आइएसपीमा पनि उपलब्ध हुनसक्लान्, जुन नेटटिभीको सेट-टप बक्स प्रयोग गरेर हेर्नसकिन्छ ।
अहिले पनि एप्‌मा उपलब्ध केही टिभिहरु 'अफलाइन' छन् । सबै टिभीहरु अनलाइन, सुचारु रुपले चलाउन पनि नेट टिभीलाई चुनौती हुनसक्ने देखिन्छ । भर्खर भर्खर इन्टरनेटको 'स्पिड'मा सुधार हुँदै गइरहेको परिप्रेक्षमा, नेट टिभी केही समय नेपालमा टिकेर चल्ने हो भने, अनडिमान्ड कन्टेन सर्भिसमा एउटा ठूलो कोसेढुंगा बन्नेछ ।
नेट टिभी हेर्नको लागि एप् डाउनलोड गर्नुहोस् । (नोट: नेट टिभी नेपालमा मात्र हेर्न मिल्छ)
➤ एन्ड्रोइडका लागि नेट टिभी एप
➤ आइफोन / आइप्याडका लागि नेट टिभी एप